Firefox waxay soo bandhigeysaa astaanteeda cusub iyo qoyska la socda | Abuurista khadka tooska ah
Mozilla ayaa si rasmi ah u shaacisay astaanteeda cusub ee loo yaqaan Firefox iyada oo qayb ka ah qoys cusub oo astaan ​​u ah mid ka mid ah daalacashada ugu isticmaalka badan kombiyuutarka iyo isticmaaleyaasha qalabka mobilada.
Un Astaanta cusub ee Firefox oo lagu garto khadadka qalooca ee khadku dhammaado iyo kuwa si wanaagsan loo isticmaalo midabbada midabka si looga tago astaan ​​aad u qurux badan oo ka buuxda firfircoonaanta iyo xoogga
Waxaan ka hadleynaa naqshadaha qaarkood ee leh in ka badan 18 bilood oo shaqo ah inaan iyaga mar hore gacanta ku hayno oo aan rajeynayno inay ku imaan doonaan cusboonaysiinta kaladuwan ee barnaamijyada iyo kuwo kale.
Hadafka Mozilla waa in dib loo wareejiyo joogitaankaaga dhammaan qoyska barnaamijyada iyo adeegyada Firefox; taas oo jidka ag fadhida, in yar baa jira. Illaa maantadan la joogo, Mozilla waa inay dhex marto fikirkeeda ku saabsan fikradaha suurtagalka u ah geedi-socodka naqshadeynta astaanta oo dhan.
Waa Sean Martel kaasoo qaatay akoonkiisa Twitter si uu si tartiib tartiib ah u muujiyo horumarkiisa. Naqshadeynta ayaa ka muuqata nidaamka sumadda cusub sida astaanta biraawsarka Firefox. Saddex kale ayaa sidoo kale lagu soo daray adeegyada sida dir, Kormeer iyo Lockwise. Nidaamka oo dhami wuxuu ku hoos jiraa dalladda astaanta Firefox ee dallad.
en el soo bandhigida fiidiyow waxaad markhaati ka noqon kartaa isbeddelka nooca Firefox Iyo sida astaanta dalladda ee Firefox waxay ahayd tallaabo ka weyn sidii ay markii hore ahayd.
Waxa kale oo ay leedahay saldhig fikradeed oo leh afar erey oo saldhig ah: xagjirnimo, dabaqad, furfuran iyo xarago Inta udhaxeysa naqshadeeyayaasha hawsha ku lug lahaa Waxaan helnay Michael Johnson, oo naqshadeeyay astaanta asalka ah ee Firefox; Jon Hicks, oo taladiisa dhiibtay; iyo Michael Chu oo ka socda Ramotion, oo ahaa macallinka ka dambeeya sumadda cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Kani waa astaanta cusub ee loo yaqaan 'Firefox' iyo qoyskeeda
Haddii Mozilla ay ahaan lahayd shirkad dadweyne oo Isbaanish ah, dib-u-naqshadayntan waxay ku kici lahayd 140.000 oo euro.
Ku jawaab Mandelrot